Home » Vaovao momba ny fizahantany » Mampanantena ny fanohanany ny filoha Tanzania vaovao HE Samia Suluhu Hassan ireo mpitantana ny fizahantany afrikanina
Tanzania dia manana filoha vaovao, HE Samia Suluhu Hassan.
Ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany dia manana fanantenana lehibe satria ny filoham-pirenena dia avy amin'ny Nosy Zanzibar, toerana fitsangatsanganana sy fizahantany lehibe ho an'i Tanzania sy Afrika Atsinanana
Miarahaba an'i HE Samia Suluhu Hassan, ny filoha Tanzania vaovao, ireo mpitantana ny fizahan-tany any Afrika
Ny filoha ATB Alain St. Ange dia mahita ny filoha vehivavy voalohany atsy Afrika Atsinanana ho mariky ny fandrosoan'ny vehivavy any Afrika
Ny filoham-pirenena ATB Alain St. Ange, izay avy amin'ny firenena aty amin'ny ranomasimbe Indianina Seychelles dia nanamarika fa ny filoham-pirenena vaovao dia avy amin'ny faritry ny Ranomasimbe Indianina any Zanzibar.
Ny filohan'ny birao mpanatanteraka ao amin'ny birao fizahantany afrikanina Cuthbert Ncube, patron Dr. Taleb Rifai, filoha Alain St.Ange. Mpikambana ao amin'ny birao Dr Walter Mzembi, Zine Nkukwana, sy Juergen Steinmetz ary tamin'ny anaran'ny mpikambana ao amin'ny ATB dia niarahaba ny filoha Tanzania vaovao. IZY Madame Samia Suluhu Hassan.
Ny filohan'ny ATB St Ange dia nilaza hoe: “Madame Samia Suluhu Hassan dia avy amin'ny Nosy Ranomasimbe Indianina any Zanzibar. Izy koa dia ny vehivavy vehivavy voalohany tany Afrika Atsinanana ary ny vehivavy fahasivy Filoham-pirenena ao amin'ny kaontinanta.
Ny birao fizahantany afrikanina dia manantena ny hiara-hiasa amin'i Tanzania hatrany satria ny kaontinanta manomana ny fandaharana ho an'ny vanim-potoana aorian'ny Covid.
Ho an'ny filoha St. Ange, ity fidirana an-tsehatra ity dia manome valisoa ny fanoloran-tenan'ny Firenena Mikambana ary koa andrim-panjakana iraisam-pirenena sy iraisam-pirenena amin'ny fampandrosoana ny fandraisan'anjaran'ny vehivavy ny fizotrany ara-politika ary indrindra ny fidiran'izy ireo amin'ny fifidianana.
Izy io koa dia maneho ny tena fahafaha-manao ho an'ny vehivavy hifindra amin'ny toeran'ny mpitarika. Faly ny Birao Afrikana misahana ny fizahantany Alain St.Ange fa izao tontolo izao dia mahazo ho avy maharitra miaraka amin'ny zony sy ny fotoana mety ho an'ny rehetra.